Al-shabaab oo soo bandhigay gaari ciidan iyo laba askari oo dowladda kasoo goostay (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Al-shabaab oo soo bandhigay gaari ciidan iyo laba askari oo dowladda kasoo goostay (SAWIRO)
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Kuunyo-Baroow ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in kooxda Al-shabaab ay halkaasi kusoo bandhigeen askar kasoo goostay ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo gaadiid dagaal ah oo ay ciidankaasi wateen.
Askartaan ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay isku soo dhiiibeen Xarakada Al-shabaab ee ku sugan deegaanka Kuunyo-Baroow ee gobolka Sh/hoose, waxaana iyaga iyo gaari nooca dagaalka ah ay wateen lagu soo bandhigay meel fagaare ah oo ku yaala deegaankaas.
Gaariga oo noociisu yahay kuwa dagaalka islamarkaana uu saaran yahay qoriga loo yaqaano Dhashiike, ayay Al-shabaab kusoo bandhigeen meel fagaare ah oo ku yaala deegaanka Kuunyo-Baroow, waxaana goobtaasi usoo daawasho tagay dadweyne badan oo deegaankaasi ku nool.
Qoryaha kale oo ay Al-shabaab goobtaasi kusoo bandhigeen ayaa waxaa ka mid aha noocyada RBG, PKM iyo AK-47.
Labada askari ee kasoo goostay ciidanka dowladda Soomaaliya oo wejiyadooda ka muuqato duruuf iyo cabsi ayaa goobtaasi kula hadlay saxaafadda.
Waxay askartaasi sheegeen in sababta ku kaliftay inay ugu soo biiraan Xarakada Al-shabaab ay tahay kadib markii ay dhibaatooyin iyo mushaar la’aan kala kulmeen dowladda federaalka Soomaaliya.